Kitapo che cheseur 20 litatra ao anaty boaty
Kitapo Cheiguroer ao anaty boaty dia fitoeram-bokatra vaovao izay manambatra ny fahafaha-mihetsika ao anaty harona ary ny tombony azo avy amin'ny kaontenera henjana na henjana, izay mahatonga azy io ho safidy tsara indrindra amin'ireo safidy rehetra ireo. Izy io dia misy kitapo plastika miendrika kioba, multi-layer, paompy, satrony na valva ary boaty baoritra.
Ny kitapom-bolantsika Cheetah ao anaty boaty dia vita amin'ny plastika multilayer. Ny sosona ivelany (polyamide + polyethylene) dia miaro amin'ny oxygen sy ny hamandoana; ny hakitroka sy ny firafiny dia mety tsy mitovy arakaraka ny filan'ny mpanjifa na ny vokatra. Ny sosona anatiny (polyethylene) dia elastika ary mahatohitra ny triatra.
Ny Cubitainers dia vita amin'ny polyethylene ambany ary toy ny fonosana voaangona, miaraka amina boaty, kaontenera, satroka polypropylene fotsy izy ireo.
Ny kaontenera sy boaty dia amidy misaraka ihany koa, ny ivon-tranonay dia mivarotra cubitainers ao Alibaba an-tserasera efa ho 10 taona mahery.
Ny cubitainers antsika dia mahafeno ny fepetra takian'ny FDA sy ireo akora rehetra izay mahatonga azy ireo ho safidy tsara amin'ny fitehirizana rano sy ny zavatra maro hafa.
Kitapo gel ultrasound 5 litatra
Kitapo gel ultrasound 5 litatra dia fitoeran-javatra vaovao izay manambatra ny fahafaha-mihetsika ao anaty harona ary ny tombony azo avy amin'ny kaontenera henjana na henjana, izay mahatonga azy io ho safidy tsara indrindra amin'ireo safidy rehetra ireo. Izy io dia misy kitapo plastika miendrika kioba, multi-layer, paompy, satrony na valva ary boaty baoritra.
Kitapo gel ultrasound 5 litatra dia vita amin'ny plastika multilayer. Ny sosona ivelany (polyamide + polyethylene) dia miaro amin'ny oxygen sy ny hamandoana; ny hakitroka sy ny firafiny dia mety tsy mitovy arakaraka ny filan'ny mpanjifa na ny vokatra. Ny sosona anatiny (polyethylene) dia elastika ary mahatohitra ny triatra.
Kitapo fonosana Adblue ao anaty boaty dia fitoeram-bokatra vaovao izay manambatra ny fahafaha-mihetsika ao anaty harona ary ny tombony azo avy amin'ny kaontenera henjana na henjana, izay mahatonga azy io ho safidy tsara indrindra amin'ireo safidy rehetra ireo. Izy io dia misy kitapo plastika miendrika kioba, multi-layer, paompy, satrony na valva ary boaty baoritra.
Ny fonosana adblue dia vita amin'ny plastika multilayer. Ny sosona ivelany (polyamide + polyethylene) dia miaro amin'ny oxygen sy ny hamandoana; ny hakitroka sy ny firafiny dia mety tsy mitovy arakaraka ny filan'ny mpanjifa na ny vokatra. Ny sosona anatiny (polyethylene) dia elastika ary mahatohitra ny triatra.
Adblue Jerry Can Containers miaraka amin'ny nozera
Amin'ny fanadiovana lasantsy rambon'ny fiara, ity adblue Jerry Can Container ity dia vita amin'ny polyethylene ambany ary toy ny fonosana voaangona, miaraka amina boaty, kaontenera, satroka polypropylene fotsy izy ireo.
Ny kaontenera sy boaty dia amidy misaraka ihany koa.
Ny adblue Jerry Can Containers dia mahafeno ny fepetra takian'ny FDA sy ireo akora rehetra izay mahatonga azy ireo ho safidy tsara amin'ny fitehirizana rano sy ny fahafaha-manao zavatra maro hafa.
Cubitainer gel ultrasound 5 litatra azo zahana
Ny cubitainer gel ultrasound 5 litatra azo zahana dia vita amin'ny polyethylene ambany ary toy ny fonosana voaangona, miaraka amina boaty, kaontenera, satroka polypropylene fotsy izy ireo.
Ny cubitainers gel misy ultrasound 5 litatra azontsika voafaritra dia mahafeno ny fepetra takian'ny FDA sy ireo akora rehetra izay mahatonga azy ireo ho safidy tsara amin'ny fitehirizana rano sy ny fahafaha-manao zavatra maro hafa.
Ity fitaovana ity dia ampiasaina amin'ny famenoana sy fametahana kitapo ao anaty boaty.
Ny paompy dia faucet plastika polyethylene ary manana famaranana / famaranana antsasaky ny fifehezana tanteraka sy ny fametrahana ny laoniny. Azo ampiasaina izy io handroahana ny ankamaroan'ny ranon-javatra tsy mirehitra amin'ny kaonteneranay.
GFampahalalana sy famaritana eneral
Ny 10l 20l fahaizana Semi-Collapsible Jerry Afaka vita amin'ny kilasy sakafo ldpe.
Izy io dia kaontenera ho an'ny fampiasana ankohonana amin'ny fitondrana sy fitahirizana rano fisotro.